भूकम्प जाँदैछ भन्ने जानकारी २० सेकेण्ड पहिले मोबाइलमै थाहा पाउनुस । त्याे कसरी ? - inaruwaonline.com
भूकम्प जाँदैछ भन्ने जानकारी २० सेकेण्ड पहिले मोबाइलमै थाहा पाउनुस । त्याे कसरी ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १५, २०७३ समय: १४:२६:१४
१५ वैशाख। काठमाडौं / नेपालमा भूकम्प आउँदैछ भनेर पूर्व सूचना दिने यन्त्र जडान गरिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले चीनको इन्टिच्युट अफ केयर लाइफ संस्थाको सहयोगमा भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरेको हो । आठ महिना अघिदेखि यो प्रविधि जडान गर्ने योजना भएपनि विभिन्न प्राविधिक कारणले एक हप्ताअघि मात्र जडान गर्न सफल भएको नाष्टका प्रविधि प्रमुख सुरेशकुमार ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
चीनको इन्टिच्युट अफ केयर लाइफ संस्थाले निःशुल्क दिएको भूकम्प पूर्व सूचना प्रविधिलाई नास्टले राजधानीका विभिन्न चार ठाउँमा जडान गरेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ केन्द्रीय विभाग, भृकुटी होटल गोदावरी र सौर्य स्कुल सिनामंगलमा जडान गरिएको हो ।
यसरी जडान गरिएका ठाउँमा भूकम्प आउँदैछ भनेर पूर्व सूचनाका रुपमा साइरन बज्ने चीनको इन्टिच्युट अफ केयर लाइफ संस्थाका उपप्रमुख डा. याङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो प्रविधि चीन, जापान र मेक्सिकोमा सफल भैसकेको छ, यो प्रविधि प्रयोग गर्ने नेपाल चौथो राष्ट्र हो ।’यो प्रविधिले भूकम्प आउँदैछ भनेर झण्डै २० सेकेण्ड पहिला नै जानकारी दिने याङले बताउनुभयो । जसले गर्दा नागरिकलाई सुरक्षित रहनुहोस् भनेर संकेत गर्छ ।
चार वटा उपकरण हुन्छन्
यो प्रविधि चारवटा उपकरणको सहायताले सञ्चालन हुने गर्छ । यसमा सेन्सर, कन्ट्रोल सेन्टर, रिसिभर र साइरन हुन्छन् । सेन्सर जति धेरै ठाउँमा जोड्यो त्यति राम्रो हुने गर्छ ।एउटा सेन्सर र अर्को सेन्सरको दुरी १५ किलोमिटरको फरकमा हुनुपर्ने प्रविधि प्रमुख ढुङ्गानाले बताउनुभयो । एउटा सेन्सरको मूल्य १० लाख डलर पर्छ । सेन्सरमा एउटा ब्याट्री पनि हुन्छ । त्यो विद्युतबाट अटोमेटिक चार्ज हुन्छ । अहिले गोरखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, सिन्धुली, रामेछाप, काभे्र लगायतका काठमाडौं आसपासका जिल्लामा गरी ३९ वटा सेन्सर जोडिएका छन् । चीनले ३ सय २० वटा सेन्सर दिने भएको छ ।
यसरी सेन्सर जडान गरिएका ठाउँमा भूकम्प गयो भने त्यसको खबर जहाँ कन्ट्रोल सेन्टर र रिसिभर राखिएको हुन्छ त्यहाँ मात्र थाहा हुन्छ । अर्को कन्ट्रोल सेन्टर हो । यसले सेन्सरको सूचना लिएर रिसिभरलाई दिने काम गर्छ । त्यस्तै अर्को कन्ट्रोल सेन्टरसँगै रिसिभर जोडिएको हुन्छ ।कन्ट्रोल सेन्टरमा आएको संकेत रिसिभरले लिन्छ । रिसिभर चल्न १ किलोवाट बिजुली चाहिन्छ । चार वटा रिसिभर जोडिएपनि अरु ६ वटा रिसिभर पनि चीनबाट आइसकेका छन् । लोडसेडिङ भएको बेला भूकम्प गयो भने यसले सूचना दिन सक्दैन । रिसिभरसँगै तारमार्फत साइरन जडान गरिएको हुन्छ । रिसिभरमा भूकम्पको संकेत आएपछि साइरन बज्ने प्रविधि प्रमुख ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
कसरी काम गर्छ यो यन्त्रले ?
एक सेन्सर र अर्को सेन्सरको दुरी १५ किलोमिटर हुन्छ । यसरी १५ किलोमिटरको आसपासमा भूकम्प जाँदैछ भने त्यसले पहिला सानो यान्त्रिक हलचल ल्याउँछ । यसरी आउने भूकम्पको यान्त्रिक हलचललाई सेन्सरले तुरुन्त थाहा पाउँछ ।सेन्सरले यो यान्त्रिक हलचललाई इलोक्ट्रोम्याग्नेटिक्स वेभको रुपमा कन्र्भट गर्छ । सेन्सरले इलोक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई टेलिकमको नेटवर्कबाट (सञ्चारको उपकरण) को सहयताले कन्ट्रोल सेन्टरलाई जानकारी गराउँछ । यसरी कन्ट्रोल सेन्टरमा जानकारी हुने इलोक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको गति प्रकाशको गति सरह हुने गर्छ ।
प्रकाशको गति भनेको तीन लाख किलोमिटर प्रतिसेकेण्ड हुन्छ । त्यसैले इलोक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि तीन लाख किलोमिटर प्रतिसेकेण्डको दरले दौडन्छ । भूकम्पले क्षति गराउने सरफेस वेभको गति जम्मा तीन किलोमिटर प्रतिसेकेण्ड हुन्छ । त्यसैले भूकम्प कन्ट्रोल सेन्टरमा पुग्नु भन्दा अगाडि नै यसको सूचना पुगिसक्छ ।कन्ट्रोल सेन्टरसँगै अर्को रिसिभर जडान गरिएको हुन्छ । कन्ट्रोल सेन्टरले भूकम्प आउँदैछ भनेर रिसिभरलाई संकेत गर्छ । यसरी रिसिभरसँग संकेत आइसकेपछि रिसिभरसँगै जोडिएका साइरन बज्न थाल्छन् । यसरी साइरन बज्न थालेपछि भूकम्प आएको हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । साइरन ४ रेक्टर स्केल भन्दा माथिका भूकम्प आउँदा मात्रै बज्छन् ।
जहाँ रिसिभर राखिएको हुन्छ, त्यहाँ वायरको मार्फत साइरन जडान गरिएको हुन्छ । जस्तो कि अहिले नास्टमा रिसिभर राखिएको छ । गोरखामा सेन्सर राखिएको छ । यदी गोरखामा भूकम्प आयो भने त्यहाँको संकेत रिसिभर राखिएको ठाउँ नास्टमा आउँछ र त्यहाँ साइरन बज्छ ।यदि नास्टमा ठूलो आवाज आउने साइरन राखिएको छ र त्यो साइरन कीर्तिपुरमा पनि सुनिन सक्छ भन्दैमा कीर्तिपुका नागरिकले पूर्व सूचना थाहा पाउन सक्दैनन् । किनभने ध्वनि तरङ्ग तीनसय मिटर प्रतिसकेण्ड कुद्छ । तर भूकम्पले क्षति गराउने सरफेस वेभको गति तीन किलोमिटर प्रतिसेकेण्ड हुन्छ । जसका कारण साइरनको आवाज कीर्तिपुर पुग्नभन्दा पहिला भूकम्पको तरङ्ग पुगिसक्छ । तर साइरन जडान गरिएको वरपर तत्काल ध्वनि तरङ्ग पुग्ने भएकाले रिसिभरको वरपरका नागरिकलाई यसले सुरक्षित रहन संकेत गर्छ ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु टाढा हुँदा चाँडो साइरन बज्छ
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जति टाढा भयो त्यति नै चाँडो रिसिभरमा पुग्छ र साइरन बज्छन् । यसरी भूकम्पको केन्द्रविन्दु टाढा भएमा २२ सेकेण्ड भन्दा अगाडि नै साइरन बज्ने गर्छन् ।साइरन निरन्तर २० सेकेण्डसम्म बज्छ । तर रिसिभर जडान गरिएको ठाउँ वरपर नै केन्द्रबिन्दु छ भने त्यहाँको आसपारको रिसिभरले काम गर्दैन । किनकी रिसिभरले सूचना थाहा पाउनुभन्दा पहिला भूकम्प गइसकेको हुन्छ । तर नजिकको रिसिभरले काम नगरे पनि केन्द्रविन्दु भन्दा टाढाको रिसिभरले काम गर्छ र नागरिकले भूकम्प आउँदै छ भनेर अगाडि नै सूचना पाउँछन् ।
कसैले सेन्सर हल्लाउँदैमा साइरन बज्दैन
त्यस्तै कसैले सेन्सरलाई हल्लाएमा साइरन बजिहाल्छ र नागरिकले दुःख पाउँछन भन्ने पनि हुँदैन । कसैले सेन्सर राखिएको ठाउँ या सेन्सरलाई हल्लाएको भरमा त्यो सूचना कन्ट्रोल सेन्टरमा पुग्दैन ।हरेक सेन्सर १५ किलोमिटरको दुरीमा जडान गरिएको हुन्छ । यसरी १५ किलोमिटरको दुरीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा सेन्सर एकैपटक नहल्ली कन्ट्रोल सेन्टरमा इलोक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको सूचना पुग्दैन ।
भूकम्प आउँदैछ भन्ने जानकारी मोबाइलमै
दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार नास्टले मोबाइलमै भूकम्पको पूर्व जानकारी गराउने बताएको छ । जसरी कन्ट्रोल सन्टरले रिसिभरलाई जानकारी गराउँछ । त्यसरी नै कन्ट्रोल सेन्टरले टेलिकमको नेटवर्क प्रयोग गरेर सिधै पठाउन सकिने नास्टका प्रविधि प्रमुख कुमार ढुङ्गेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस बारेमा नेपाल टेलिकमसँग कुरा भइरहेको छ ।
‘सुरुमा टेलिकमका कतिपय कर्मचारीले हामी यस्तो सहकार्य गर्दैनौं तपाईहरु एनसेलसँग सहकार्य गर्नुस् भनेपनि अहिले उहाँहरु पनि सकरात्मक हुनुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘टेलिकमले हामीसँग यो सम्झौता गरेमा रिसिभर र साइरन चाहिदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोही व्यक्ति कुरा गरिरहेको छ भने पनि त्यसलाई काटेर भूकम्पको सूचना पठाउन सकिन्छ ।’ जसका लागि टेलिकमसँग छिट्टै सहकार्य गर्ने र सबैतिरबाट सहयोग पाएमा अबको झण्डै एक वर्षमा नागरिकले मोबाइलबाटै जानकारी पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा आएको भूकम्प चीनमा समेत एकै समयमा थाहा हुने
चीनले यो प्रविधि जडान गर्नुको एउटा मुख्य उदेश्य नेपालमा आएको भूकम्पको सूचना तत्काल चीनमा पु¥याउनु रहेको छ । नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको देश मानिन्छ । यसरी नेपालमा आएको ठूलो भूकम्प वा चीनसँग सीमा जोडिएका नाकामा आएका भूकम्पको असर चीनमा पनि पर्न सक्छ । यसरी नेपालमा आएको भूकम्पको बारेमा चीनले तल्काल थाहा पाएमा सुरक्षित रहन सक्ने नास्टका प्रविधि प्रमुख ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
अहिले नेपालका चार ठाँउमा जडान गरिएका रिसिभरको नेटवर्क चीनले पनि चिन्दु शहरमा जडान गर्न लागेको इन्टिच्युट अफ केयर लाइफ संस्थाका उपप्रमुख डा. याङले बताउनुभयो । जसले यहाँको भूकम्पको गतिविधि तत्काल चीनले थाहा पाउँछ ।त्यस्तै नास्टले पनि चीनमा जडान भएका रिसिभरको नेटवर्कलाई नेपालमा जडान गर्ने योजना बनाएको छ ।जसले चीनका विभिन्न भागमा गएका भूकम्पको सूचना तत्काल नेपालमा थाहा पाई सुरक्षित हुन मद्दत पुग्ने नास्टका प्रमुख ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उज्यालाे अनलाइनबाट